A Good Manager (မန်နေဂျာကောင်း တစ်ယောက်၏ စွမ်းရည်များ) -
A Good Manager (မန်နေဂျာကောင်း တစ်ယောက်၏ စွမ်းရည်များ)
Posted by mesi_user
ခေတ်သစ်မန်နေဂျာများအတွက် A Good Manager အရည်အချင်းများအား ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပေးထားပြီး၊ လုပ်ငန်းတခုလုံး၏ Top Management (ထိပ်ပိုင်းအဆင့်) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် Supervisory Management (ကြီးကြပ်မှုအဆင့်) စီမံခန့်ခွဲမှုများအကြား လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်မြင်စေရန် ချိတ်ဆက်ဖော်ဆောင်ပေးနေသည့် (Mid Management – Managers) များ၏ အရည်အချင်းများကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားလို့ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်များစွာအကျိုးရှိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
(1) Communicator (ပြန်ကြား ဆောင်ရွက်သူ)
 လုပ်ငန်း၏ အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်ကြားဆောင်ရွက်မှုပြုသော (တင်ဆက်ပြသမှုများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ အစီရင်ခံစာတင်ပြမှုများ၊ ဆွေးနွေးမှုများတွင်) ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း)
(2) Problem & Conflict Solver (ပြဿနာ နှင့် ပဋ္ဋိပက္ခ ဖြေရှင်းသူ)
 (ပြဿနာ နှင့် ပဋ္ဋိပက္ခအကြား ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းနိုင်မှု စွမ်းရည်ဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကြား လုပ်ငန်းနှောင်နှေးမှုမရှိတိုးတက်လာမှုသို့ ရှေ့ရှုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း)
(3) People Management (လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု)
 (လူသားစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု စွမ်းရည်ပြည့်ဝပြီး လုပ်ငန်းနှင့် စပ်ဆက်လျှက် ရှိသော အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၀န်ထမ်းများ၊ လုပ်သားများအပေါ် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲနိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း)
(4) Experiences (အတွေ့အကြုံရှိခြင်း)
 (လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ အကျိုးပြုနိုင်သော လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျင်းသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံကောင်းများရှိခြင်း)
(5) Ambition (စိတ်အားထက်သန်ခြင်း)
 (မိမိ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စိတ်ဓါတ်တွန်းအားပေးခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိစေရန် ဦးဆောင်မှုရှိခြင်း)
(6) Determination and Patient (စိတ်ရှည်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း) 
(ပြဿနာ နှင့် လုပ်ငန်းကိစ္စများအပေါ် ဖြေရှင်းနိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှုရှိခြင်း နှင့် မည်သည့်ခက်ခဲမှုတွင် စိတ်ရှည်မှု၊ စိတ်ထိန်းချုပ်မှုများရှိခြင်း)
(7) Knowledgeable (ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝခြင်း) 
(လုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်သော အထွေထွေဗဟုသုတများနှင့် ကိုးကားဖော်ပြ မှုများတွင် သတင်းအချက်အလက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံ၊ နည်းစနစ်များအပေါ် သဘောပေါက်သိရှိနားလည်မှုရှိခြင်း)
(8) Initiative and Risk Taking (ကိုယ်စွမ်းပြမှု နှင့် စွန့်စားခြင်း) 
(စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ကိုယ်စွမ်းရှိမှုများ နှင့်အတူ လက်တွေ့ကျ သော စိတ်လှုံ့ဆော်ပေးမှုများနှင့် တာဝန်ယူမှုများအပေါ် လုပ်ငန်းများအပေါ်စွန့်စားလုပ်ဆောင်ခြင်း)
(9) Being Organized (အဖွဲ့အစည်းရှိခြင်း)
 (စနစ်ကျသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံနှင့် အရင်းအမြစ်၊ အသင်းအဖွဲ့ပုံစံနှင့်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ယုံကြည်ချက်များအပေါ် အာရုံထားရှိမှု နှင့် ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းစဉ်သို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း)
(10) Direction and Suggestion (အကြံပြုမှု နှင့် ဦးတည်ချက်ရှိခြင်း)
 (တိကျသည့် ရည်မှန်းချက်ရှိမှုနှင့် အဖွဲ့များအား လက်တွဲခေါ်ယူမှုနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အကြံဥာဏ်၊ ဝေဖန်မှုများအပေါ် လက်ခံခြင်းနှင့် အလိုက်သင့်ပုံဖော်ပေးနိုင်ခြင်း)
(11) Organization Familiar (အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း)
 (အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မည်သူမှာ ကောင်းမွန်သည့် ၀န်ထမ်း၊ မည်သို့အရင်းအမြစ်ရနိုင်မှု၊ မည်သည့် အချိန်တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးနိုင်မှု စတဲ့သဘောများအား သိမြင်နားလည်ခြင်း)
(12) Knowledge of Technology (နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သိမြင်မှု)
 (တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ပူးတွဲစီမံနိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအတွင်း နည်းပညာဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်မှုရှိစေရန်အတွက် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်မှု စွမ်းရည်ရှိခြင်း)
စသဖြင့် မန်နေဂျာကောင်းတစ်ယောက်တွင် မဖြစ်မနေရှိသင့်သည့် အရည်အချင်းကောင်းတချို့ကို Future Myanmar ၏ “Management & Leadership” သင်ရိုးများမှ ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုများ တိုးတက်လာပြီး လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အထောက်အကူများစွာဖြစ်စေဖို့ အကြံပြုဖော်ပြပေးလျှက်။
Management & Leadership (စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု)
(7-S Framework) လုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာ
အောင်မြင်ဖို့ – အောင်မြင်သူတွေကို Role Model စံပြထားစေပါ
Work Life Balance ဆိုတဲ့… ဘ၀မှာ (အောင်မြင် ပျော်ရွှင်) ဖို့အတွက်လား… ???
အမှတ်တရ ပျော်ရွှင်မှုတွေဆိုတာ ဘ၀မှာ ပီတိခွန်အားတွေပါပဲ။ ၅ ရက် တပတ် အလုပ်လုပ်ပြီးချိန်မှာ – တနေ့ ၁ ရက် အပန်းဖြေကြသလိုပဲ… ၁ နှစ်တာ အလုပ်လုပ်ပြီးချိန်မှာတော့ – တနှစ် ၁ ခါ အပန်းဖြေခရီးထွက်သင့်ပါတယ်။ Work & Life Balance (အလုပ်နဲ့ဘ၀) မျှတပြီး ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်မှုတွေကို …
4 Types of Leadership – လုပ်ငန်းတို့ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဦးဆောင်မှုပုံစံ (၄-မျိုး)
ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ရမှာလဲ… ? ? Why don’t you succeed yet??
Jack Ma (ဘီလျံနာဖြစ်အောင်) ဘယ်လိုကြိုးစားသွားလဲ… ?
ထိရောက်စွာ ကြော်ငြာနည်း (5M)
No 33, Myaung Mya Street, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar
+95 788 888 434, +95 7888 99774
Our Institutes in Myanmar
•	MESI Business Institute
(Yangon Township, Yangon, Head Center)
(Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Franchised)
(Kyine Tone, Franchised)
•	City of Oxford College (UK)
•	BANBURY AND BICESTER College (UK)
•	SMC University (Switzerland)
•	Robinson Business School
•	Myanmar Institute of Finance
•	Trade Training Institute
•	YSX Stock Exchange
•	SME Business Institute
•	Myanmar Enterprise Solution
Copyright @ 2017 By www.mesi.com.mm All right reserved.